Ecuador mechiri World March - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Ecuador mechiri World March
10 / 03 / 2020 10 / 03 / 2020 site Jessica Orrala Slim
Ọmụmụ Naval Admiral Illingworth Naval bụ ntọala maka mmechi nke ụbọchị nke abụọ nke ọnwa Machị
La Ọmụmụ Admiral Illingworth Naval bụ ntọala maka mmechi nke 2M World March maka Udo na enweghi mmegide, isi Ekwedọọ. Studentsmụ akwụkwọ, ndị nkuzi, ndị nne na nna na ndị ọbịa pụrụ iche zukọtara na emume a. Ihe mmemme ahụ malitere site na ntinye nke ndị ikike nke Naval Academy, Sonia Venegas Paz, onye isi nke Association World enweghị Wars na enweghị Ime Ihe Ike na ọtụtụ ndị otu ya, Commando platoon na ndị na-ahụ maka ndị nkịtị nke obodo, ndị ikpeazụ mejupụtara ụmụ akwụkwọ na-ebu ọkọlọtọ nke mba dị iche iche.
Site na ụda nke ilu, ilu bals, na une na cymbals, ndị agha nke ụlọ ọrụ a na-ebuso agha ahụ kwụsịrị ihe omume ahụ ma nye puku kwuru puku ndị sonyere nnukwu ụbọchị a aka gburugburu ụwa.
Nweta ihe omume a bụ n’aka onye ọka iwu Iván Vaca Pozo, onye isi ọdịbendị nke Ọmụmụ Ọdọ, gbara ụmụ akwụkwọ ahụ ume ka ha na-amụ akwụkwọ na klas ha nke ọ bụla ka ha nwee udo nke udo na imeghị ihe ike. Na mgbakwunye, o kelere ntinye aka nke Mundo Sin Guerras Ecuador nwere mgbe ọ na-akpọ ha ịbanye na 1st South America March na ịbụ ndị ga-emechi March 2 World nke abụọ na mba anyị.
Ogbugbu nke akara ndi mmadu apughi ighapu, ndi nile n’agha weghaara onwe ha rue mgbe ha ghaputara akara nke udo. Ọzọ, otu ndi ọzọ nwere aka dị ọcha n'aka ha mere ọfụma nke nduru, ebe onye na-ahụ maka ya tụbara nnukwu obi, nke emere na ugo.
"Mara na ị ga - achọ ka ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, wepu egwu gị ..." bụ olu ụtọ Lilly Chele sitere na ngalaba isi nwanyị, onye bụrụ abụ Esperanza bụ ọha na eze, nwere olile anya na anyị nwere ụdị ụdị ime ihe ike n'etiti mmadu.
Folklọ akụkọ ọdịnala Ecuadori nọkwa, yi uwe ndị nnọchiteanya nke ugwu anyị, ndị agba egwu ji aka wee sị "KWES PER PE Nweta udo, Ọ B VGH V VIOLENCE."
N'ikpeazụ, ekele nke rstù Na-ahụ Maka Udo nke Italy, a kpọrọ ndị bịaranụ ka ha bịa gosipụta ihe osise 120 nke ụmụaka sitere n'akụkụ ụwa niile mere.
0 / 5 (Nyocha 0)